CINEMABEIRO ayaa si rasmi ah loogu soo bandhigay A Coruña - The World March
Bogga ugu weyn » Noticias » Qoraalada saxaafadda » CINEMABEIRO ayaa si rasmi ah loogu soo bandhigay A Coruña
30 / 09 / 2020 by Antonio Gancedo
Barnaamijka "I Mostra de Cinema pola Paz e la Nonviolencia", CINEMABEIRO, waxaa la qaban doonaa Oktoobar 2, 3 iyo 4
"I Mostra de Cinema pola Paz e la Nonviolencia", CINEMABEIRO, ayaa lagu soo bandhigay Sebtember 29, 2020 Xarunta Dawladda Hoose ee A Coruña.
Waxaa soo qabanqaabiyey Mundo sen Guerras e sen Violencia oo kaashaneysa 16 jaaliyadood iyo kooxo bulsheed, maalgelinta EMALCSA Foundation iyo iskaashiga Golaha Magaalada ee A Coruña, waxaa la qaban doonaa Oktoobar 2, 3 iyo 4 iyadoo la adeegsanayo labo qaab: Wadahadallada khadka tooska ah iyo waji-ka-waji baaritaanka dhismaha La Domus ee ku yaal A Coruña.
María Núñez, agaasimaha barnaamijka CINEMABEIRO, oo lagu tilmaamay ujeeddooyinka Mostra "wacyigelinta bulshada iyo cambaareynta khilaafaadka sii kordhaya iyo in cod la siiyo dadka dhaqanka ku ah rabshad la'aanta".
Yoya Neira, oo ah xubin ka tirsan Golaha Daryeelka Bulshada ee Golaha Magaalada A Coruña, ayaa carabka ku adkeeyay in "Coruña ay calaamad u noqon doonto ixtiraamka iyo dhismaha xuquuqda aadanaha iyadoo loo marayo dhaqan."
Sida ay sheegeen qabanqaabiyayaasheeda, “CINEMABEIRO wuxuu ka dhashay baahida loo qabo in la abuuro dhacdo u heellan kor u qaadista, milicsiga iyo ka hadalka Xuquuqda Aadanaha, kaliya ma ahan magaalada A Coruña laakiin sidoo kale Galicia.
Qalab aad muhiim u ah in la soo sheego oo rabshadaha la arko
Shineemo waa aalad aad muhiim ugu ah cambaareynta iyo muujinta rabshadaha ka socda xuquuqdeena. Waa daaqad inaga dhigaysa inaan la xirirno xaqiiqooyin kale; Hadal aargudasho ah oo na abaabula isla markaana noo fududeeya fahamka adduunka kana go'an ka go'naanta xuquuqda aadanaha.
Waxayna sii wadaan sharraxaadda:
“CINEMABEIRO waa madal loogu talagalay in lagu faafiyo nooc kale oo shaneemo ah, oo leh jihayn bulsho oo cad, ujeedadeeduna tahay in bulshada loo soo dhoweeyo arrimaha ay ka midka yihiin shaqo la’aanta, socdaalka, rabshadaha jinsiga, isbeddelka cimilada, sinnaanta iyo ka mid noqoshada.
CINEMABEIRO, waxay ujeedkeedu yahay inay noqoto Bandhig takhasus gaar ah leh
Daabacaaddii 1-aad ee CINEMABEIRO waxay noqon doontaa bandhig loogu talagalay shineemada Xuquuqda Aadanaha ee ugu wanaagsan, iyadoo la siinayo xulasho taxaddar leh oo ah filimaan dhawaanahan muuqaal ah iyo filimmo gaagaaban, oo ay la socdaan xaflado ballaaran oo adduunka ugu wanaagsan.
Daabacaaddan koowaad ee "Mostra Internacional de Cinema pola Paz Cinemabeiro" waxay ku leedahay barnaamijkeeda afar filim oo muuqaal ah, lix iyo toban gaagaaban iyo shan miis wadahadal ah oo ay ugu wacan tahay xiisadda COVID-19, in lagu qaban doono khadka tooska ah, iyadoo ay ka qaybgalayaan kuwa ku hadla. NGO-yada iyo ururada iskaashiga la leh dhibaatooyinka kooxaha soo socda:
Dhibaatada ku noolaanshaha masaafuriska iyo xuquuqda tahriibka
Dumarka iyo hooyonimada: su'aal galinta nidaamka taranka heteropatriarchal
Xuquuqda waxbarasho ee dadka naafonimadooda shaqeed iyo maskaxeed, cillad maskaxeed iyo qatar ku ah ka saarida bulshada
Isbedelka cimilada iyo xumaanshaha dimuqraadiyadda oo khatar weyn ku ah dhulkeenna
Takoorida jinsiga, cuqdada weyn ee dadka halista ugu jira ka saarida bulshada
Waxaa lagu dhameystiri doonaa wareysiyo dhowr ah oo idaacado ah oo lala yeelanayo soo saarayaasha loo dhan yahay, oo laga sameeyay isku xirka waalidiinta dadka qaba cudurka maskaxda (ASPACE) Coruña ee barnaamijkeeda 'La radio de los Gatos'.
CINEMABEIRO, oo loogu talagalay Mundo sen Guerres e sen Violencia, ayaa qayb ka ah ololaha sanadkan + Nabada + Rabshadaha - Hubka Nukliyeerka kaas oo loogu dabaaldego heer meeraha iyadoo hawlo fara badani u dhexeeyaan Sebtember 21, 2020 ilaa Oktoobar 2, 2020